Aung San/Aung San Suu Kyi » နိုင်ရင်ပြီးပြီ – The winner takes it all	22
မြစပဲရိုး says: လာမှာ လာမှာ။ ပြောင်းလာမဲ့ လေသံ တွေ ကို စောင့်နားထောင်။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်။ ခြေထိုးပြီး ကန့်လန့်တိုက် နေသူ တွေ စာရင် ဉာဏ်လေးသုံးပြီး ပေါင်းတတ်သူ က တော်ပါသေးတယ်။
ခင်ဇော် says: Win Naing Oo
2 hrs · ..
ကျနော်တို့ သူ့ အတွက်မတွေးပဲ ကိုယ့်မျိုးဆက်အတွက် တွေးတာများပြီး မတရားသလိုများဖြစ်နေပြီလားမသိလို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
မြစပဲရိုး says: သူ အလုပ်လုပ်နေတာ ကြည့်ပြီး ကိုယ်လဲ ပိုပိုပြီး အလုပ်လုပ်ချင်စိတ် ပေါ်လာတာ၊ တိုင်းပြည် ကို ပိုချစ်တတ်လာတာ ၊ နိမ့်ပါးသူ တွေ ကို ကူညီပြီး ဆွဲခေါ်ချင်လာတာ။ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ တကဲ့ Real Model အမျိုးသမီးကြီးပါ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ပါလှေလျှာငါးပိချက် ဘွားဒေါ်ဖြစ်မည် ဆိုရင်တော့ ဘဘဘိုချုပ်ကျီးအူးခင်ညွှန့် ပြေးမြင်မိမှာပဲစ်။ ခုထိတော့ မတူသေး… သူ့လူတွေကတော့ ဘိုခင်ညွှန်နဲ့ တူလာပီ…။
kai says: အိုဘားမားက.. ၈၈နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်… ကျူးဘားသွားလည်နေတယ်…။
အမှားမခံ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: အမှား မှာ အစစ်နဲ့ အတုရှိလားဟင်?
kai says: အရင်က.. ဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမဖြစ်…နိုိင်ငံခြားရေးမူနဲ့.. ဆင်းဆင်းရဲရဲ.. တခါးပိတ်နေခဲ့ကြတာပေါ့…။
အမှန်အစစ်ရှိ… လူတိုင်းလူတန်းစေ့သွားမည်ဖြစ်ပါ၏..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: ဒီရက်ပိုင်း တိုင်းရေးပြည်ရေးသာလို့
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ပြောင်းလဲဖို့ပဲ လိုတယ် ကိုယ်တွေခေတ်မှာ အပြောင်းလဲကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ခွင့်ရ ကိုယ်တိုင်နွှဲခွင့်ရတာကိုလည်း ကျေနပ်တယ်
ခင်ဇော် says: အမှန်အတိုင်းပြေါရရင် ဒီလို အခြေအနေဖြစ်လာမယ်လို့ မယုံရဲခဲ့ဘူး
kai says: ဘွားဘွားတွေဖြစ်တဲ့အခါ.. မြေးတွေ ပြန်ပြောပြပေါ့…။
ငါ့လက်နဲ့ ငါ့ကြမ္မာ.. ငါကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလုပ်ယူခဲ့တာလို့လေ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12200
Thint Aye Yeik says: သားတို့ကတော့ အမေစု ခုရက်ပိုင်း/လပိုင်းထဲ တစ်ကွက်ပြီးတစ်ကွက် အကွက်ရွှေ့သွားတာတွေ
ခင်ဇော် says: အေးးဆို..!!
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟုတ်တယ်.. အူးသေးစိမ် ကို လူမုန်းများအောင်လုပ်တာ.. ဘောမဒေ ရှေ့ဆုံးက ပါတယ်.. အရောက်ပို့ပေးနေသလိုပဲ..
ခင်ဇော် says: သူ ကိုယ်တိုင် အသုံးမကျတာက
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .သူ( ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည်) ကပြောလိမ့်မယ်ထင်တယ်
ခင်ဇော် says: ဒီထက် ခိုင်းတဲ့ တွန်းတဲ့ အထဲ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ကေဇီ ပြောခဲ့သမျှ စကားတွေထဲ အမ ကို ဟတ်အထိစေဆုံးက – မြန်မာတွေ တကယ် အလုပ်မလုပ်ကြသေးဘူး – တဲ့။ အလုပ်ပျင်းတဲ့ အမကို အဲဒီစကားက သွယ်ဝိုက် ဆုံးမသွားတယ်။
ခင်ဇော် says: တကယ် အလုပ်လုပ်တတ်မှ လုပ်ဖူးးမှ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မြန်မာတွေ တကယ်ကို အလုပ်မလုပ်ဘူး ကေဇီ။ အမက ရပ်ကွက်ထဲနေတဲ့လူဆိုတော့ ကောင်းကောင်းသိ။ မိန်းမတွေ သန်းတုပ်တုန်း၊ ၂လုံးတွက်တုန်း၊ ယောက်ျားတွေ ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ ရေမြောင်းတောင် မဖော်ကြ။ တစ်မြို့လုံး ခြင်တွေ သောက်သောက်လဲ ကိုက်နေတာ။ ဘယ်သူ့မေးလိုက်မေးလိုက်၊ ခြင်မသတ်ဘူးတဲ့။ လာကိုက်မှ ခြင်ရိုက်တယ်။ နေရင်းထိုင်ရင် ငရဲမလိုချင်ဘူးတဲ့။ အဲဒါ လူတိုင်းနီးပါး ဖြေတဲ့အဖြေ။ လူတွေအကုန် ဒီတိုင်းပဲ ရှိနေပါတယ် ကေဇီရေ။ ဘယ်သူမှ ဟုတ်ဟုတ်ငြားငြား အလုပ် ထမလုပ်ကြသေးပါဘူး။
လုံမလေးမွန်မွန် says: စကားအတင်းစပ်ရရင်တော့ လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပဲ ရှိသေးတယ်..
တကယ်ပြောတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: အဲဒါ မီးကြွင်းမီးကျန်တွေလို ရှင်းးရမှာ